1 JỌN 2 - Baịbụl Nsọ [Igbo Bible 1988] - (1JỌ 2)
Ya mere anyị nwere ike ịmata na anyị bụ ụmụ Chineke ma ọ bụrụ na anyị na-edebe iwu e nyere anyị.
Dị ka ọ dị, onye ọ bụla na-ekwu sị, “Abụ m onye Kraịst”, ga-eme ihe Kraịst nyere nꞌiwu. Ma onye na-akpọ onwe ya onye Kraịst ma ọ dịghị eme ihe o nyere nꞌiwu bụ onye okwu ụgha.
Ma ndị ahụ na-edebe iwu Kraịst, ndị na-eme ihe ọ chọrọ ga-amụta otu e si ahụ Chineke nꞌanya. Nke a bụkwa ụzọ e si ama onye bụ onye nke Kraịst nꞌezie.
Ọ bụrụ na mmadụ asị na ya bụ onye nke Kraịst, o kwesịrị ibi ndụ dị ka Kraịst si bie.
Ụmụnna m ndị m hụrụ nꞌanya, ọ bụghị iwu ọhụrụ ka m na-enye unu idebe kama ọ bụ otu iwu ochie ahụ unu nwere site na mbụ. Ọ bụkwa otu iwu ahụ unu maara ihe banyere ya.
Ma ọ bụ iwu na-adị ọhụrụ oge nile, nke nwekwara ike ịrụrụ unu ọrụ dị ka o si rụọra Kraịst ọrụ. Oge nile anyị na-eme ihe iwu ahụ kwuru, ya bụ ịhụ mmadụ ibe anyị nꞌanya, mgbe ahụ ka ọchịchịrị nile dị nꞌime anyị na-apụ, na-enye ìhè ọhụrụ nke ndụ a na-ebi nꞌime Kraịst ohere ka o nwupụta.
Ma onye ọ bụla na-ahụ mmadụ ibe ya nꞌanya na-ejegharị ije ya nꞌime ìhè. Onye ahụ na-ahụ ụzọ nke ọma, matakwa ebe ọ na-eje. Ọ dịkwaghị asụ ngọngọ nꞌije ya.
Nꞌihi na onye ọ bụla na-akpọ nwanna nꞌime Kraịst asị na-ejegharị nꞌime ọchịchịrị. Ọ makwaghị ebe ọ na-aga nꞌihi na ọchịchịrị ahụ ekpuchiela ya anya mee ka ọ hapụ ịhụkwa ụzọ.
Unu ndị okenye ka m na-edere ihe ndị a, nꞌihi na unu maara Kraịst, onye ahụ na-adị ndụ site na mbụ, mgbe ọ na-adịghị ihe e kere eke dị. Ọ bụkwa otu ihe ahụ ka m na-edere unu ụmụ okorọbịa, nꞌihi na unu emeriela ekwensu. Ana m edekwara unu ihe a unu ụmụntakịrị nwoke na nwanyị nꞌihi na unu anụla, kwerekwa na Chineke onye bụ Nna anyị.
kwụsịnụ ịhụ ụwa ọjọọ a nꞌanya, ya na ihe nile dị nꞌụwa nke unu na-ahụ anya. Nꞌihi na onye na-ahụ ihe ndị a nꞌanya na-egosi na ọ hụghị Chineke nꞌanya.
Ya mere, anaghị m edegara unu akwụkwọ a dị ka ndị ịmụta ihe bụ ezi ozizi dị mkpa, kama ọ bụ ka m dọọ unu aka na ntị ka unu bụrụ ndị na-asa anya unu mmiri ịchọpụta ihe bụ eziokwu nꞌoge a ajọ ozizi dị.
Ònye bụ onye okwu ụgha ahụ kachasị ndị okwu ụgha nile? Ọ bụ onye ahụ na-asị na Jisọs abụghị Kraịst ahụ. Onye dị otu a bụ onye iro Kraịst, onye na-emegide Kraịst. Nꞌihi na o kwereghị na Chineke ma ọ bụ na Jisọs Ọkpara ya.
Ya mere, onye ọ bụla naekweghị na Kraịst enwekwaghị Chineke ma ọlị. Ma onye ahụ nwere Kraịst nwere Chineke bụ Nna.
Ya mere, nọgidenụ nꞌokwukwe unu, dị ka e ziri unu site na mbụ. Ọ bụrụ na unu emee nke a, unu na Chineke Nna na Kraịst Ọkpara ya gaenwe ezi nnwekọ na-adịgide.
Kraịst nꞌonwe ya ekwela anyị nkwa inye anyị ndụ ebighị ebi.
Ana m edere unu ihe ndị a ime ka unu mara ihe banyere ndị iro ahụ na-emegide Kraịst. Nꞌihi na ha na-agbalịsi ike iduhie ndị mmadụ.
Ebe anyị maara na Chineke bụ onye na-eme ihe ziri ezi anyị pụrụ ịsị na ndị nile na-eme ihe ziri ezi bụ ụmụ Chineke.
1 JỌN 2:3
1 JỌN 2:4
1 JỌN 2:5
1 JỌN 2:6
1 JỌN 2:7
1 JỌN 2:8
1 JỌN 2:10
1 JỌN 2:11
1 JỌN 2:13
1 JỌN 2:15
1 JỌN 2:21
1 JỌN 2:22
1 JỌN 2:23
1 JỌN 2:24
1 JỌN 2:25
1 JỌN 2:26
1 JỌN 2:29